ကုန်ကြမ်း Fulvestrant (129453-61-8) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Fulvestrant (129453-61-8)
rating: SKU: 129453-61-8. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Fulvestrant (CAS 129453-61-8) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Fulvestrant အမှုန့် ဓာတုအီစရိုဂျင် receptor ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေး Tamoxifen (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရာ) နှင့် (အကျိတ်ဆဲလ်များကိုရရှိနိုင်သည့်အီစထိုဂျင်ကိုလျှော့ချထားတဲ့) ကို aromatase inhibitors မတူဘဲ, fulvestrant အီစရိုဂျင် receptor ပုံပျက်သောအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်တွေထဲမှာအီစထိုဂျင် receptors မှယှဉ်ပြိုင်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် binding အီစထိုဂျင်လျော့နည်းသွားသည်။
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Fulvestrant (129453-61-8) အသုံးပြုမှု
Fulvestrant (CAS 129453-61-8), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Faslodex ဖြစ်ပါတယ်။
Fulvestrant ယင်းတင်ပါးတစ်ကြွက်သားသို့မိနစ် 1 မှ2ကျော်ဖြည်းဖြည်းထိုးသွင်းခံရဖို့အဖြေတစ်ခု (အရည်) အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Fulvestrant (129453-61-8) amedical ရုံးအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်သူနာပြုများကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီနောက်တစ်လတစ်ကြိမ်ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ချိန်ကပထမဦးဆုံး2ဆေးများသည်3ရက်သတ္တပတ် (ရက် 1, 15 နှင့် 29) နှင့်ထို့နောက်ပေးထားသည်။ သငျသညျနှစျခုကသီးခြားထိုး (တစ်ဦးချင်းစီတင်ပါးအတွက်တဦးတည်း) အဖြစ်ဆေးကုသမှုသင့်ရဲ့ထိုးခံရလိမ့်မည်။
သွေးထွက်၏အန္တရာယ်, Hepatic ချို့ယွင်း, ဆေးထိုးဆိုက်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့လူနာတွေအတွက်တိုးမြှင့် Exposure, သန္ဓေသား-သန္ဓေသားအဆိပ်အတောက်အောက်ပါဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုဟာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏အခြားကဏ္ဍများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
ဟော်မုန်းဟာသွေးကြော whichenter, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလင်းများကထုတ်လုပ်နေကြပြီးကြောင်းဓါတုဗေဒပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်နှင့်အခြားတစ်ရှူးအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းဟာဝှေးအတွက် လုပ်. ထိုကဲ့သို့သောအသံနဲ့တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်နက်ရှိုင်းအဖြစ်အထီးဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကင်ဆာရောဂါကုသဟော်မုန်းကုထုံးများအသုံးပြုမှုတချို့အကျိတ်ဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်များမှာဆဲလ်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းတိကျသောဟော်မုန်းအဘို့အ receptors သောလေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံးတစ်ခုအချို့သောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ဟော်မုန်း receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း, သို့မဟုတ်အကျိတ်ဆဲလ်ကအသုံးပြုမရနိုငျသောတက်ကြွဟော်မုန်းများအတွက်ဓာတုဗေဒအလားတူအေးဂျင့်အစားအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံး၏မတူညီသောအမျိုးအစားများကိုသူတို့ရဲ့ function ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ထိခိုက်ကြောင်းဟော်မုန်းအမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
အတော်များများကရင်သားကင်ဆာကင်ဆာ receptors အီစထိုဂျင်ပြီ, ဤကင်ဆာ၏ကြီးထွားအီစထိုဂျင်ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွ canbe ။ Fulvestrant (129453-61-8) အနေနဲ့အီစရိုဂျင် receptor downregulator ဖြစ်ပါတယ်, ဒီကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အီစရိုဂျင် receptor site ကိုမှချည်နှောင်ဆိုလိုသည်။ က receptors အားဖြင့်အီစထိုဂျင်မှပုံမှန်ဆဲလ်လူလာတုံ့ပြန်မှုတားဆီးဆင်းချိုးဖျက်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုက်ဖို့ချည်နှောင်ပြီးတာနဲ့။
AASraw ထံမှ Fulvestrant ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို